Marcus Garvey: Nna nke ịdị n'otu nke ndị Africa - AFRIKHEPRI
Marcus Garvey: Nna nke Afrika
Welcome AKWỤKWỌ Ị GA-EFE
Marcus Garvey (1887-1940) bụ otu n'ime ndị dike mbụ nke Jamaica. Nnukwu onye agbachitere ihe kpatara ojii. Ọ gara Central America, Brazil, United States ... ebe niile ọ kpọsara ọnọdụ dị egwu nke ndị isi ojii. N'afọ 1914, ọ hiwere otu Universal Negro nweta Association na African (UNIA), ọgbakọ mba ụwa mbụ na-eme mkpọsa iji meziwanye ọtụtụ ndị isi. E bufere isi ụlọ ọrụ ya afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị na New York.
Ọ nwere mmasị n'akụkọ ihe mere eme nke Afrika, karịsịa na Liberia ebe ndị America na ndị Etiopia tọhapụrụ ọtụtụ ndị ojii ojii, ọ bụ nanị ọchịchị ojii ka dịpụrụ iche. Ọ bụ onye na-akwado nke "Back to Africa" ​​nke mepụtara na 1920 afọ. Otú ọ dị, okwu ya na-akwado ịhapụ n'etiti ndị ojii na ndị ọcha adịghị n'otu n'ime ndị ndú ojii.
Na 1916, o kwupụtara na eze ojii ga-abụ okpueze n'Africa n'oge na-adịghị anya nakwa na ọ ga-arụ ọrụ maka ndị ojii. Ọ bụ n'echiche a ka e mesịrị, eze nke Etiopia, Ras Tafari, ga-ahọpụta dị ka onye nzọpụta nke ndị ojii na nke a ga-amụ Rastafarianism.
"Marcus Garvey bụ onye Black mụrụ na Jamaica na 1887, afọ abụọ mgbe nzuko Berlin gasịrị ebe Europe na-ekekọrịta Afrika na n'ụbọchị ikpeazụ nke ịgba ohu nke Brazil na Cuban.
Site na Kingston (Jamaica) na New York, London, Paris ma ọ bụ Geneva, mgbe ọ na-agagharị agagharị, Garvey bụ ụda mkpọtụ maka ihe mgbu nke ndị ojii, na-ebuga na Amerika ma ọ bụ na ndị Europe na-achịkwa ha n'ala ha. N'ịbụ ndị a machibidoro ma ọ bụ machibido ịnọ, site n'aka ndị colonialist ma ọ bụ ndị ịkpa ókè agbụrụ, Antillean, Marcus enwebeghị ike ịzọ ụkwụ n'Africa. Ọ nwụrụ na London, na nhụsianya.
Ndụ ya na echiche nke Marcus Garvey na-etinye kpamkpam maka ịchụpụ ndị ojii. "
Ọ nwụrụ na London na 1940, chefuuru ya niile. A nafere ntụ ntụ ya na 1964 na Jamaica ebe ọ ghọrọ dike nke mba.
Ederede dị nsọ si ojii ojii Africa
Imeri amoosu na Africa